'အစီစဉ် တင်ဆက်သူ တစ်ယောက် အဖြစ်ရော သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ ဒိုင်လေးယောက်နဲ့အတူ ပျော်ပေ - Yangon Media Group
Myanmar Idol သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာ အစီစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်တဲ့ ကျော်ထက်အောင်က အခုနှစ် Myanmar Idol Season3မှာ တင်ဆက်သွားမှာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ စင်ပေါ်မှာတင်ဆက်တဲ့အခါ တည်တည်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောကြတဲ့အပေါ် ကျော်ထက် အောင်က အခုလိုပြောပါတယ်။
”အရင်တုန်းကတော့ ကျွန် တော်အစီစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်လုပ်ရင် တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ် နေတယ်လို့ လူတော်တော်များများကပြောကြပါတယ်။ အမှန် တော့ အဲဒါက ကျွန်တော့်ပုံစံလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို တည်တည်ကြီးနေရတာလည်းဆိုရင် စင်ပေါ်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်က တစ် ယောက်ကို ဖြုတ်ရမှာဆိုတော့ တည်တည်ကြီးနေရတာ ကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ အခုဒီနှစ်မှာကတော့ ကိုယ်ကလည်း သရုပ်ဆောင် အတွေ့အကြုံလေး နည်းနည်းရှိလာတော့ အမူအယာလေးတွေပါလာမယ်။ နောက်ပရိသတ်နဲ့က လည်း ထိတွေ့ဖူးပြီးသားဆိုတော့ ပိုပြီးရင်းနှီးသွားပြီ။ အဲဒါကြောင့် ဒီနှစ်မှာက အစီစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ယောက်အဖြစ်ရော သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေ နဲ့ပါ ဒိုင်လေးယောက်နဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး Myanmar Idol Season3ကို တင်ဆက်သွားမှာဆိုတော့ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းမှာပါ”လို့ပြောပါတယ်။ Myanmar Idol Season3ရဲ့ လူရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်း နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့(ဧပြီ ၁၇ရက်) ကစပြီးထုတ်လွင့်ပြသနေပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် Myanmar Idol Season3မှာအရင်နှစ်များနှင့်မတူ ထူးခြားမှု အစီအစဉ်များရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းမှုကိုလည်း အခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ” Myanmar Idol နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ အခုကတော့ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဇူလိုင်လနဲ့ သြဂုတ် လတွေမှာတော့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Myanmar Idol Season3မှာထူးခြားတာတွေကတော့ ဒိုင်လေးယောက်ဖြစ်တာကလည်း ထူးခြားသလို ဒိုင်လေးယောက်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့အရွှန်းဖောက်တာတွေကလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် ထူးခြားမယ်။ နောက် အရယ်နိုင်ဆုံးကတော့ မတင်ဇာ မော်ဖြစ်မှာပါ။ အန်ကယ်(မြန်မာပြည်သိန်းတန်)၊ နောက် ကိုမျိုးကျော့ (အဆို တော် မျိုးကျော့မြိုင်)၊ ကိုရန်လေး(သရုပ်ဆောင် ရန်အောင်)တို့ကလည်း တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကာရိုက်တာတွေက မတူကြပါဘူး။ နောက် ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲ ဝင် အဆိုရှင်လေးတွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ အရမ်းပွဲလှမယ့် နှစ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောပြပါတယ်။
''ဒါရိုက်တာ လုပ်ရင်လည်း ဒါရိုက်တာ စိတ်မွေးတယ်။ သရုပ်ဆောင် လုပ်ရင်လည်း သရုပ်ဆောင် စိတ်ပဲ မွေ??
အချမ်းသာဆုံး ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် အမျိုးသမီးအဖြစ် Forbes မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးတွင် ကိုင်လီဂျန်နာ ??